देउवालाई बीचमा राखेर ओली-प्रचण्डको संवाद – Nepal Press
देउवालाई बीचमा राखेर ओली-प्रचण्डको संवाद
२०७८ मंसिर २४ गते १७:१३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाविशेनलाई सुभकामना दिन नेकपा (एमाले) का केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत आए ।
संयोग नै मान्नुपर्छ कांग्रेस माधिवेशनले नै तत्कालीन नेकपाबाट विभाजित भएका नेताहरु ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई धेरै पछि एकै मञ्च सेयर गर्ने अवसर जुरायो । गत पुसदेखि ओली र प्रचण्डबीच प्रत्यक्ष भेट भएको थिएन । त्यस्तै ओली माधव नेपाल भेट गत २३ असारयता भएको थिए ।
एकअर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै आएका उनीहरूले कांग्रेस कार्यक्रमको शुरुवातमा संवादको त कुरै छाडौं इसारले एकआपसमा समेत हेरेनन् । ओली कार्यक्रममा ढिला आएका थिए । उनी आउँदा मञ्चमा बसेका नेताहरूले नमस्कार गर्दै स्वागत गरेका थिए ।
तर, कार्यक्रमको अन्तिममा भने यस्तो अवस्था तोडियो । आफ्नो सम्बोधन सकेर प्रचण्डले देउवासँग कार्यक्रमबाट बिदा माग्दै थिए। त्यही बेला आफूले सम्बोधन गरिरहेको माइक बन्द भएपछि ओली पनि पोडिएयमबाट आफू पहिले बसिरहेकै स्थानमा आए ।
त्यही बेला ओली र प्रचण्डबीच संक्षिप्त भलाकुसारी भयो । प्रचण्डले कार्यक्रमबाट बिदा हुँदै गर्दा देउवालाई नमस्कार फर्काए । जानै लागेका प्रचण्डलाई ओलीले पनि हात उठाउँदै नमस्कार गरे । लगत्तै प्रचण्डले पनि जवाफमा हात फर्काए । माधव नेपालले भने पहिले नै मञ्च छोडिसकेका थिए ।
आज भएको ओली-प्रचण्डको संवादले उनीहरूबीचको तिक्ततालाई थोरै भए पनि कम गर्ला कि ।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर २४ गते १७:१३
मलाई मत नदिनेको पनि सभापति मै हुँ : देउवा (भिडिओ)
काँग्रेस प्रदेश २ अधिवेशन : महामन्त्रीमा जितको घोषणालाई सच्याएपछि विवाद चर्कियो
प्रदेश-२ कांग्रेस सभापतिमा देउवा पक्षका कृष्णा राय यादव निर्वाचित
यस्तो बन्यो कांग्रेसको नयाँ केन्द्रीय समिति, देउवालाई दुई तिहाई (सूचीसहित)
रामचन्द्रको वक्तव्य- राजनीतिबाट विश्राम लिएको होइन, अल्पविराम मात्रै
कांग्रेस जनजाति महिला केन्द्रीय सदस्यमा देउवा पक्षको क्लीन स्वीप
कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य खसआर्यतर्फ कस–कसले जिते ?
आदिवासी जनजाति केन्द्रीय सदस्यमा चिनकाजीको सर्वाधिक मत, अरु कसले जिते ?
कांग्रेसको कोषाध्यक्षमा विनोद चौधरीको सम्भावना, चर्चामा चित्रलेखा पनि